Libya oo yeelanaysa wejiga Suuriya & QM oo baaraysa dayuuradaha uu Ruushku siiyey Khaliifa Xaftar + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Libya oo yeelanaysa wejiga Suuriya & QM oo baaraysa dayuuradaha uu Ruushku...
Libya oo yeelanaysa wejiga Suuriya & QM oo baaraysa dayuuradaha uu Ruushku siiyey Khaliifa Xaftar + Sawirro
(Tripoli) 22 Maajo 2020 – Khubaro ka socota QM ayaa baaris ku bilowday 8 dayuuradood oo ah kuwa guuxooda ka dheereeya oo uu Ruushanku u daabulay Dagaal-ooge Khalifa Haftar, xilli ay Libya yeelanayso wejiga Suuriya.
Sida ku dhigan Financial Times waxay tillaabadan oo ka dhan ah cunaqabataynta hubka ee Libya ay sidoo kale kasii daraysaa xaaladda cakiran ee dalkaasi, iyadoo uu Wasiir Gudeedka Libya, Fathi Bashaga, uu sheegay in dayuuradahan laga soo duuliyey saldhigga Ruushka ee Hmeimim ee Gobolka Latakia ee Suuriya, iyadoo ay dhici karto inay 8 ka badan yihiin.
Imaaraadka ayaa isna la sheegay inuu 10,000 oo tan oo hub ciidan ah iyo saanado kale sida 11,00 oo ah gaaska dayuuradaha uu sanadkan 2020 oo qura siiyey 76-jirkan Xaftar oo saldhigta Benghazi, taasoo ay beeninayso Abuu Dabeey.
Xaftar ayaa la sheegay inuu dayuuradahan u adeegsan karo dib u celinta Howlgalka Operation Peace Storm oo ay Ciidamada Dowladda GNA bilowday 26-kii Maarso, gaar ahaan Saldhigga Al-Watiya oo dhowaan laga qabsaday kaddib 6 sanadood, isagoo sidoo kale u dhaartay Turkiga oo dhaar kale ugu jawaabey.
“Waxaannu markale ku celinaynaa inay cawaaqib xumi xigi doonto haddii la weeraro danaha Turkiga. Goodinta dhanka Haftar-na waxay muujinaysaa heerka khasaaraha gaarey,” ayay u dhigan tahay farriin lasoo dhigay webka Wasaaradda Dibedda Turkiga oo horayna Haftar ugu digey markii uu duqeeyey meel u dhow Safaaradda Turkiga ee Tripoli.
Ruushka ayaa la sheegayaa inuu Haftar siiyey ugu yaraan 6 MiG-29 iyo 2 Sukhoi 24 oo xilligii Soofiyeetka la sanceeyey, kuwaas oo uu kasoo dhiibey ama soo marsiiyey saldhiggiisa Hmeimim ee Suuriya, sida uu Wasiir Gudeedka Libya, Fathi Bashagha u sheegay Bloomberg.
Previous articleMarkab shaqo naadir ah qabta oo uu Turkigu sameeyey oo ay dunidu aad u dalbanayso (Muxuu qabtaa?)
Next articleSAWIRRO: DF oo kaddib Kenya caddaysay dalalka ay kasoo daad-guraynayso Soomaalida ku go’doonsan (Arag 3-da dal ee ku xiga)